Isevisi "Ukhishwe ngokuthi" (MTS): yokuxhuma kumbe ukhupha
Mhlawumbe, cishe yonke opharetha amaselula manje kukhona inkonzo ngokuthi "Ngokuthi." MTS, isibonelo, ngokwakhona, it uxhuma kubasebenzisi bayo. By the way, muva akusiyo isiphakamiso ewusizo enjalo. Umuntu othile ufuna amandla, futhi abaningi bayazibuza wokuyeka inketho. Manje kumelwe sikuqonde konke lokhu. Ulwazi oluwusizo kakhulu mayelana service "Ukhishwe ngokuthi" (MTS) lapha ngenzansi. Zonke ukuthi ababhalisile odinga ukukwazi ngaphambi kokuqala umsebenzi nge isiphakamiso. Uma kungenjalo, kungenzeka ezinye izinkinga ezibangela eziningi Ukunganeliseki phezu ingxenye amakhasimende.
Kuyini inketho ngokuthi "Ukhishwe ngokuthi" (MTS)? Empeleni, lolu hlobo umyalezo otholakala ababhalisile ngesikhathi uxhumano kunethiwekhi. Uma ungekho omunye bazame ukukuthola, uyobe ngokushesha uthole i-SMS isaziso. Igumbi ngalinye kuyoba incwadi ehlukile.
Imiyalezo sizobonisa yomshayeli onibizela, nemizamo yamuva ukuxhumana nawe. Plus lapha kubonisa isibalo izingcingo uma ungekho. Ngezinye izikhathi kulula kakhulu. Kuzomele ivele inethiwekhi isikhokhelo njengoba ucingo eza ephendula isaziso ngalokhu. Ngakho-ke iyasiza kwezinye izimo ivela MTS isevisi "Ukhishwe ngokuthi."
Nokho, kukhona ungomunye kusimo abalulekile. Ngaphambili, le ndlela kwaba ngokuphelele khulula. Futhi akazange isidingo sokuthi ucabange ngakho imininingwane ngaphambi ukwenza kusebenze isevisi "Ukhishwe ngokuthi" (MTS). Kodwa kwaphela iminyaka eminingana, lokhu kungenzeka isibe ekhokhwayo.
Yiqiniso, kulesi simo akuyona ikakhulukazi ufuna ukwenza uxhumano. Ikakhulukazi uma akuvamile zinyamalale kusukela inethiwekhi futhi ungakwazi kalula ukufinyelela. Imali ekhokhelwa isevisi isuswe nsuku zonke. Ngisho noma kwathiwa ayivulwanga ngisho kanye ngosuku. Ngosuku kufanele ukhokhe ruble 1 kuphela. Hhayi okuningi, kodwa achithe kuzo imali eyengeziwe kuselula cha dinga anyone. Kwezinye izifunda, imali nyangazonke for the "Ngubani Ngokuthi" (MTS) kuyinto ruble mayelana 60 ngenyanga.
Nokho, zikhona okumbalwa. Kwabanye, inketho "Ukhishwe ngokuthi" tariff izinhlelo free. Uhlu mikhulu. Futhi ingatholakala kwi-website esemthethweni ye-opharetha. Ukuze ukuxhumana ukukhokha lutho akudingekile.
Manje ungafunda kancane mayelana nokuxhuma nokunqamula lakala lanamuhla. Kunezinto eziningi ongakhetha. Khumbula, cishe kunoma iyiphi indlela uxhumano kufanelekile ukwenqaba ongakhetha. Futhi inqubo yokuqala engasetshenziswa - ucingo ku-opharetha.
Kuselula ukudayela 0890 bese ulinda impendulo we-opharetha. Ngezwi-irobhothi, okuyinto evame kuhlanganisiwe ezicashe umshini wokuphendula, akudingekile ukuxhumana - inqubo izobanjezelwa isikhathi eside. Tshela opharetha ongathanda ukwenza kusebenze isevisi "Ukhishwe ngokuthi" (MTS). Vuma nge imininingwane ongakhetha futhi ukhokhe bese ulinde isikhashana. Wena okuzokhishwa isicelo ehambisana. Ekupheleni inqubo, uzothola isaziso mayelana kusebenze ngempumelelo.
By the way, ukwenqaba "Ngubani elibizwa" okulungiselelwe ngendlela efanayo. Kuphela kuleli cala, opharetha angacela imininingwane yakho yokungena kwelinye izwe. Kuyadingeka ukuba uqinisekise ubuwena nezinsiza SIM card ngawe.
Inketho "Ukhishwe ngokuthi" (MTS) inganikwa amandla ocingweni nge isicelo esikhethekile. Wabiza USSD-umyalo. limelela ukulandelana ezivamile elilodwa self zokubhalisa ingena kuselula, bese ithumela ngokucubungula. USSD-imiyalo mahhala kuwo wonke amacala. Ngosizo lwabo nganoma isiphi isikhathi (ngisho ebusuku), ungakwazi senqabe noma ubhalisele amasevisi athile ovela ku-opharetha.
Unesithakazelo kusukela MTS isevisi "Ngubani okuthiwa?" Sanquma ukuzama it in action? Kwabe sekukhala ucingo kalula uzitholele * 111 * 38 #. Ngemva chofoza "Call" ku igajethi yakho. Uma ube nebhalansi eyeqile kuselula yakho, impendulo uzothola umyalezo nge umphumela. Ngokuvamile-ke uthi "Isevisi" ukukushayela "exhunywe ngempumelelo. Ngiyabonga ngokuba nathi. MTS". Yilokho. Manje ungakwazi ungakhathazeki ukuthi uzoba miss izingcingo ezibalulekile. Njengoba ubona, MTS "Ngubani okuthiwa" exhunywe ngezindlela eziningana.
Thina ongavalelisi nakho konke
Kungakhathaliseki ukuthi yokugibela yakho. Uma ungatholi kohlu, yashicilelwa ku-website esemthethweni MTS, manje noma ngokuhamba kwesikhathi uyeka ukucabanga mayelana ukuzikhipha iphakethe wethu wamanje. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma uze ukwazi cishe njalo uthole ngokusebenzisa. Ngokwesibonelo, ngokuvamile ngaphambi kwanoma ubani senqabe tariff "Super-MTS." "Wena ubulokhu ubizwa ngokuthi, 'lapha kuwukuchitha imali eyengeziwe. Futhi ngokuvamile, yimuphi isiphakamiso nge imali nyangazonke kuphakamisa imibuzo mayelana ukuzikhipha amanye amasevisi eziphathelene nezimali.
Kuyenzeka kube ukusiza umyalo afanele efonini yakho. Njengoba kunjalo nge uxhumano, udinga ukuphrinta futhi ulithumele inhlanganisela ukucubungula. Ukuze ohlweni "Ngubani Ngokuthi", kuyodingeka kusebenza * 111 * 38 #. It kuvela ukuthi ukuze vumela noma vimbela umsebenzi namuhla kudingeka iqembu elifanayo. Lokhu yinto engavamile kakhulu.
Okubalulekile: umlayezo nge umphumela kucutshungulwa isicelo zingeza nokubambezeleka of imizuzu mayelana 15-20. Ungagijimeli obukwenza, futhi ke ngokuphindaphindiwe uvule futhi off, "Wena ubulokhu ubizwa ngokuthi."
Inketho zokugcina ukukhansela amasevisi uxhumano yabo - iyona inthanethi. Noma kunalokho, "I-akhawunti yami" kusuka MTS. Isevisi "Ngubani Ngokuthi" isebenze kuhle kalula futhi ingasebenzi nalo.
Badinga kuphela ngemvume ku-website yenkampani bese uvula "Amasevisi". Uma ulapho ungabona uhlu zonke izipesheli opharetha. Ngokuphambene nalabo ukuthi usunayo, uzobona "Valiwe". Uma kungenjalo, uzobona "Xhuma". Chofoza isignesha ezifanele mayelana "Ngubani Ngokuthi", thayipha ikhodi ekhethekile ukuphepha (ke kuyakufika kuwe kuselula yakho uma uchofoza) bese uqedela msebenzi.
Ezokuxhumana opharetha "megaphone": tariff kungekho imali nyangazonke
Sausage "Amateur": Ukwakheka
Lathyrus tuberosus - imidumba ukwahlukahlukana. Sebenzisa ukudla ukwenza umuthi
Ukufaneleka of Pisces futhi Aquarius nabanye Izimpawu zezinkanyezi
Stephanotis: ukunakekelwa ekhaya ngenxa jasmine Madagascar
Izimoto eqolo 2017: 7 onobuhle